वाह ! १०० रुपैयामा स्नातकोत्तरसम्म पढ्न पाईने स्कुल खुल्यो : फहराईयो नेपाली झण्डा «
वाह ! १०० रुपैयामा स्नातकोत्तरसम्म पढ्न पाईने स्कुल खुल्यो : फहराईयो नेपाली झण्डा
प्रकाशित मिति :3June, 2019 9:41 pm
सय रुपैयाँ कत्तिका लागि हातको मयल होला । कत्तिका लागि त्यति जुटाउन धौ–धौ पनि हुनसक्छ । एकसय रुपैयाँ भयो भने तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ ?
धेरैलाई थाहा छ समता स्कुलमा कक्षा एकदेखि स्नातकोत्तरसम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई महिना दिनको शुल्क १ सय रुपैयाँ मात्र बुझाए पुग्छ । । समतामा अध्ययनरत विद्यार्थीले मासिक सय रुपैयाँमा पढ्न पाउँछन् । यो स्कुल नेपालका ७७ जिल्लासँगै श्रीलंका, बंगलादेश र भारतमा समेत सञ्चालनमा छन् ।
आजै मात्र यो स्कुल बर्मामा समेत स्थापना भएको छ । बर्मामा स्थापना भएको बारे कलाकार हरिबंश आचार्यले जानकारी दिएका छन् । ‘निम्नआयस्तर भएकाको छोराछोरी नै समतामा पढ्ने हुन्,’ समता स्कुल संयोजक सुशील अधिकारीले सुनाए, ‘केही समययता सबै खालका विद्यार्थी पढ्न आउँछन् ।
तर पनि सम्पन्नका छोराछोरी आउँदैनन् । प्रतिष्ठाका लागि पनि सम्पन्नले समतामा पढाउँदैनन् । मेरा छोराछोरी समतामा पढ्छन् भनेर गौरव गर्दैनन् । अपवादबाहेक यहाँ गलैंचा बुन्ने, ज्याला–मजदुरी गर्नेका छोराछोरी पढ्छन् ।’
समता स्कुलमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी सालिन्दा बढिरहेका छन् । यसपटक १० कक्षामा चार सय बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । ‘अभिभावकलाई धन्यवाद दिन्छु,’ संयोजक अधिकारीले गौरव गरे, ‘अभिभावकले हामीलाई विश्वास गरेर विद्यार्थी नपठाए डेस्क, बेन्चलाई पढाउन मिल्दैन । बाँसबाट निर्मित कक्षाकोठालाई पढाउनुको अर्थ छैन ।’
१० कक्षामा अध्ययनरत समताका विद्यार्थी बिहान सातदेखि बेलुका ६ बजेसम्म स्कुलमै बिताउने गर्छन् । एसईई तयारीको बेला उनीहरूले ११ घन्टा विद्यालयमै बिताए ।
कक्षा एकदेखि ९ सम्मका विद्यार्थी भने १० देखि ५ बजेसम्म विद्यालयमा रहन्छन् । ‘समतामा अध्ययनरत पढ्ने र नपढ्ने विद्यार्थीलाई एउटै कक्षामा राखिँदैन,’ उनले थपे, ‘पढ्ने र नपढ्ने विद्यार्थी छुट्ट्याउनुहुँदैन भन्छन् । तर, त्यसो गरे अभिशापजस्तै हुन्छ । नपढ्ने विद्यार्थीले पढ्नेलाई डिस्टर्ब गर्छन् ।
नपढ्नेलाई पढ्नेसँग राखिदिए राम्ररी पढिदिन्छ । तर, त्यसो होइन । नपढ्नेले पढ्नेलाई दुःख दिन पाउँदैन । पढ्नेको काम नपढ्नेलाई सिकाउनु पनि होइन ।’
पढ्ने र नपढ्नेलाई एउटै कक्षामा राख्दा शिक्षकलाई पनि समस्या हुन्छ । शिक्षकले कक्षाकोठा प्रवेश गरिसकेपछि गाह्रो–गाह्रो पढाउने कि सजिलो । सजिलो पढाउँ जान्नेलाई फलदायी हुँदैन । गाह्रो पढाउँ गणितका सूत्रसम्म थाहा नहुने विद्यार्थीलाई ध्यान दिएर पढाउँ जान्नेलाई त्यत्तिकै असजिलो हुन्छ ।
‘तर, कक्षा छुट्ट्याइयो भने पठनपाठनका लागि सहज हुन्छ,’ उनले थपे, ‘म त्यस्तो कक्षामा जाँदै छु भनेर प्रस्ट भएपछि शिक्षकलाई पठनपाठनका लागि सजिलो हुन्छ ।’ सम्बन्धित कक्षाका विद्यार्थीको पहिलो परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएपछि क्षमताअनुसारका विद्यार्थीलाई छुट्टाछुट्टै कक्षामा राखिन्छ ।
अघिल्लो पटक समता स्कुलबाट १ हजार ५०७ जनाले एसईई उत्तीर्ण गरेका थिए । काठमाडौंबाट मात्रै ४५७ जना उत्तीर्ण भएका हुन् । १ हजार ५०७ जनामध्ये दुई सयजनाभन्दा बढीले ‘ए प्लस’ ल्याएका थिए ।
तलब बृद्धिमा असन्तुष्ट बन्दै आन्दोलनको चेतवानी, सबै स्कुल एकै पटक बन्द गर्ने धम्की
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघिय संसदमा यहि जेष्ठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६ ०७७ बजेटमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको मनोवल उच्च होस् भन्दै कर्मचारीहरुको तह अनुसार १८ र २० प्रतिशतका दरले तलब बढाए ।
तर अन्य सबै कर्मचारीहरुको तलब बढे पनि विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय सहयोगी, कर्मचारी र बालविकास स.का. प्रति राज्यले उपेक्षा तथा अन्याय गरेको भन्दै स्थायी शिक्षक हक हित मञ्च नेपाल, दमौली तनहुँले विज्ञप्ती जारी गरेको छ।
न्यून तलबमा बर्षौदेखि काम गर्दै आएका तल्लो तहका कर्मचारीको समस्यालाई बजेटले सम्बोधन नगरेको तथा समयानुकुल पारिश्रमकि बृद्धि गर्न नसकेको प्रति सरकारलाई ध्यानकर्षण गराएको छ।
नेपालले विभिन्न अन्तराष्टिय संघ संस्थासँग गरेको प्रतिबद्धता र अन्तराष्टिय श्रम संगठनको अभिसन्धि मर्मलाई अवमूल्यन गरि विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी अन्तराष्टिय श्रम संगठनले तोके भन्दा कम पारिश्रमिकमा काममा लगाई श्रमशोषण गरेको आरोप हकहित मञ्चले लगाएको छ।
नेपाल सरकारले छिटो भन्दा छिटो समायनुकुल पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने पर्ने माग उनिहरुले राखेका छन। यदि यसकुरालाई वेवास्ता गरेमा स्थायी शिक्षक हकहित मञ्च, नेपाल बाध्यहुने चेतावनी दिएका छन। उसले सबै विद्यालय एकैपटक बन्दा गराउने विषयमा स्मरण गराएको छ ।